Nepali Rajneeti | खाडीबाट पैसामात्र होइन, यस्ता दुखदायी कुरा पनि बोकेर अाउँछन नेपालीहरू !
अषोज ९, २०७८ शनिबार ६४ पटक हेरिएको
मानिसको शरीरमा रहेको फोहोर पदार्थ र बढी भएको पानीको मात्रालाई छानेर पिसाबको माध्यमबाट शरीरबाहिर पठाउने अंग हो मिर्गौला ।
प्रत्येक मिर्गौलाको आकार सिमीको गेडा जस्तो चारदेखि पाँच इन्च लामोसम्म हुन्छ ।
जसमा एउटा अति नै सानो फिल्टर हुन्छ र यो फिल्टरले रगतमा भएको फोहोर र बढी पानीलाई बाहिर पठाउने गर्छ ।
विभिन्न रिपोर्ट अनुसार नेपालमा करिब ३० लाख मानिसमा मिर्गौलासम्बन्धी कुनै न कुनै रोग लाग्ने गरेको देखाएको छ । मिर्गौलाको उपचार अत्यन्त महँगो भएका कारण पनि यो रोगबाट बच्नका लागि सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यही विषयमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञसमेत रहेकी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)की डीन डा दिव्या सिंह शाहसँग मिर्गौला रोगको अहिलेको अवस्थामा अनलाइनखबरकर्मी सुदर्शन अर्यालले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
देशभर नै मिर्गौला रोगीको संख्या बढ्यो भनेर यकिनका साथ भन्नको लागि हामीसँग तथ्यांक त छैन । तर अस्पतालमा आएका मिर्गौला पीडितको संख्यालाई हेर्दा पछिल्लो समय संख्या बढेको देखिन्छ । मिर्गौला पीडितहरुमा पनि कतार, साउदी अरबजस्ता खाडी मुलुकबाट आउनेहरुमा मिर्गौलाको समस्या धेरै देखिएको छ ।
यो के कारणले भयो ? भन्ने बारेमा पनि अध्ययन भएको छ । जसबाट धेरै गर्मी र खाना खाने यकिन रुटिन नभएकाहरुमा समस्या देखिएको हो कि ? भन्नेमा अध्ययन हुँदा व्यवस्थित रुपमा खाना खाने र एसिमा बस्नेहरुमा पनि यस्तो समस्या भेटिएको छ ।
मिर्गौ लालाई असर गर्ने मुख्यतः केही कारणहरु छन् । मधुमेह मिर्गौलामा समस्या निम्त्याउने मुख्य कारण हो । यसले आँखा बिगार्ने, पक्षघात जस्ता समस्या पनि निम्त्याउँछ । त्यस्तै, रक्तचा पपनि मिर्गौला रोगको अर्काे कारण हो । हामीहरु कुनै समस्या भयो भने पेन किलर खाएर तत्कालीन दुखाइ कम गर्छाैं ।
चिकित्सकको प्रेस्किप्सनविना नै पे नकिलर जस्ता कडा औषधि खाँदा पनि यसले मिर्गौ लामा समस्या निम्त्याउन सक्छ । जथाभावी जडीबुटीको धुलो खाने गरिन्छ । आयुर्वेदिक उपचार भन्दै मात्रा नमिलाई यस्ता औषधि खाँदा पनि यसले मिर्गौलामा समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
यो रोग सुरुमै पत्ता लाग्यो भने सामान्य हो, तर धेरै पछि पत्ता लाग्यो भने धेरै जटिल पनि हुन सक्छ । कति मान्छेलाई मिर्गौला फेल भइसक्दा पनि समस्या थाहा हुँदैन । यस्तो अवस्थासम्म पुगेपछि या त जिन्दगीभर डाय ग्नोसिस गर्नुपर्छ या त मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ । समयमा थाहा नहुँदा यो महँगो रोग हो र समयमै थाहा पाइयो भने सामान्य उपचार गरेर पनि यो निको हुन्छ ।
सबैमा मिर्गौला रोग लाग्दा लक्षण नदेखिन सक्छ । तर बिहान बिहान खुट्टा सुन्निने, आँखाको डिल सुन्निने, हिँड्दा धेरै थकाइ लाग्ने, पिसाब गर्दा फिँज आउन थाल्यो भने पनि मिर्गौला मा सम स्या छ भन्ने हुन्छ । मिर्गौलामा समस्या आउँदा पिसाब धमिलो आउँछ, चिया जस्तो गाढा रंगको पिसाब आउँछ, पिसाब पोल्छ, पिसाब राम्ररी निस्कँदैन । यिनै समस्या देखियो भने मिर्गौला रो ग लागेको हुन सक्छ, यस्तो देखियो भने तुरुन्त उपचार गर्न जानुपर्छ ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि मान्छे केही समयपछि नै सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ । तर पनि शारीरिक स्वास्थ्यको बारेमा भने ध्यान दिनुपर्छ । तर प्रत्यारोपणपछि नियमित डायला सिसको समस्या भने देखिँदैन । यो खबर अनलाइन खबरमा अाज छापियको छ।